Nividy ny Dredge ny filankevitra eran'ny tanànan'ny Virginia tao - Ellicott Dredges
Filohan'ny Erosiana City of Virginia Beach dia nividy Ellicott® Brand Dredge
Aprily 1, 2000
Ellicott® International dia nanolotra ilay «dredgehead» «Rudee Inlet II» ho an'ny tanànan'ny Virginia Beach, Etazonia. Ny dredge Series 14 mirefy 970-inch dia ampiasaina hitazonana ny morontsiraka fialam-boly ao amin'ny tanàna fialantsasatra. Ny dredge dia nanolo ny dredge marika tsy Ellicott® izay ny vidin'ny fihenan-tsasatra sy ny fikojakojana no nanosika ny Kaomina Erosion tao an-tanàna hanome sosokevitra ny fanoloana azy ireo.
Ny Vaomiera Erosiana dia ekipa mpikambana dimy notazonina tamin'ny fitazonana ilay lozisialy fitsangatsanganana. Ny filankevitra dia mitazona fahaiza-manao fitrandrahana fasika ao amin'ny Rudee Inlet efa ho 25 taona mahery, nametraka fandaharam-pohy mitohy tsy misy torapasika.
Asa fanendrena no notendren'ny tompon'andraikitra ao amin'ny tanàna mba hanara-maso ny fahazoana dredge vaovao. Ny injeniera mpanampy ny tanàna sy ny mpitantana ny filan-kevitra lavaka dia namolavola ny mombamomba ny dredge vaovao miaraka amin'ny fanampiana avy amin'ny Corps of Engineers Marine Design Center any Philadelphia.
Nasaina ny fanasana ho amin'ny tolotra. Taorian'ny famerenana ny tolo-kevitry ny herin'asa, Ellicott® International dia nahazo ny fifanarahana. Ny City of Virginia Beach dia manana ny dredge, izay hokarakarain'ny Filankevitra Erosiana amin'ny fiparitahana ny fako any Rudee Inlet.
Navoaka avy amin'ny International Dredging Review